Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Laatiin Ameerika Airbnb Cusub 12 ee ugu Jaceyl
Airbnb waxay hadda la soo baxday 12 -ka goobood ee ugu sarreeya fasaxyada Latin America.
Tani waa gobol ay ka buuxaan dhaqan, taariikh iyo dalxiisyo dalxiis oo aad u weyn oo sannadihii la soo dhaafay ku soo kordhay sumcadda dadka safarka ah ee ka yimid Mareykanka. Intaa waxaa dheer, in la helo bulsho badan oo Laatiino ah, had iyo jeer waxaa jiray isbeddello ah safaro lagu tago gobolka si loo horumariyo loona joogteeyo xiriirka qoyska oo maanta lagama maarmaan u ah sidii hore.
Sida laga soo xigtay xogta Airbnb, gobolka Laatiin Ameerika wuxuu noqday dhaqan u socdaalayaasha ka socda Mareykanka. Iyada oo ku saleysan tirada raadinta laga sameeyay madasha, 12ka magaalo ee ugu caansan Laatiin waa:
4. Cancun, Meksiko
8. Ensenada, Meksiko
10. Puerto Penasco, Meksiko
Markay timaaddo xilliga xagaaga, meelaha ugu caansan waxay ahaayeen xeebaha, gaar ahaan Meksiko halkaas oo Playa del Carmen iyo Ensenada ay u jihaysan jireen meelaha 2021, iyagoo kor u kacay 6 boos marka la barbar dhigo 2019, iyo sidoo kale Tulum, oo ka baxay lambarka 7 illaa lambarka 3 ee ku jira liiska, oo ku salaysan tirada raadinta. Meelaha loo socdo magaaladu sidoo kale way ka duwan yihiin liiska, oo ay ku jiraan Mexico City iyo Medellín, oo labaduba loo aqoonsaday dalabkooda dhaqanka sare.
Gobolku wuxuu u taagan yahay ikhtiyaar la heli karo oo loogu talagalay booqdayaasha Waqooyiga Ameerika oo qiimihiisu celcelis ahaan yahay habeenkiiba wax ka yar 150 USD.
“Kaliya maahan dadka socotada ah ee Mareykanka ah ee raadinaya meelaha bixiya soo -jiidashada dhaqanka iyo baxsashada xeebaha kuleylaha, laakiin qaar badan oo ka tirsan bulshada Latinx waxay raadinayaan inay dib ula xiriiraan xididdadooda oo ay booqdaan meeshii ay ka yimaadeen si ay u arkaan waalidiinta, ayeeyada iyo awoowayaasha. Airbnb waxay bixisaa suurtagalnimada helitaanka hoy magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar ee dhammaan qaybaha gobolka, ”ayay tiri Stephanie Ruiz, Agaasimaha Isgaarsiinta ee Latin America.
Haynta Seychelles meesha ugu sareysa ee maskaxda ee Hungary